Faysal Oo Ka Hadlay Dacwad Ay Reer Borama U Dhiibeen Oo Ah Wasiir Cali-mareexaan Oo Iibiyay Guriga Badhasaabka Awdal, Maayarada Hargeysa & Berberana Ugu Hanjabay Cashuur Joojin
Home WARARKA Faysal Oo Ka Hadlay Dacwad Ay Reer Borama U Dhiibeen Oo Ah...
Hargeysa(Berberanews)-Hoggaamiyaha xisbiga UCID Md. Faysal Cali Waraabe, ayaa ku hanjabay in isaga iyo taageeryaashiisu samayn doonaan cashuur joojin haddii aanay maayarada Hargeysa iyo Berbera joojin ololaha ay ku taageerayaan xisbiga kulmiye.
Md. Faysal oo shalay hadal ka jeediyay munaasibad loo sameeyay arday ka qalin jabisay jaamacadda Hargeysa, wuxuu balan qaaday in haddii uu talada dalka ku guulaysto uu miisaaniyadda dalka 17% ka mid ah gelin doono waxbarashada, jaamacadahana u rogi doono kuwo qaranku leeyahay.
Md. Faysal wuxuu sheegay in wasiiradu boob ku hayaan dhulkii dawladu lahayd, isagoo tusaale u soo qaatay wasiirka hawlaha guud Md. Cali Xasan Maxamed (Mareexaan) oo ay bulshada reer Borama uga dacwoodeen, maadaama oo uu iibiyay gurigii badhasaabka Awdal, “Beri dhawayd oo aan Borama tagay ayay reer Borama ii dacwoodeen oo ay yidhaahdeen wasaaradii hawlaha guud ayaa gurigii badhasaabka iibinaysee naga qabo, Wasiirka hawlaha guud ayaan ku idhi waar ma dhulkii Burco ayaa kugu filnaan waayay maxaa Borama ku geeyay.” ayuu yidhi Faysal oo ay bulshadu aad ugu sacbisay hadalkiisa, waxaanu dawladda u soo jeediyay inay ilaaliso dhulka jaamacadda Hargeysa islamarkaana ay la wareegto guryaha bulshadu leedahay ee jaamacadda ku xeeran si jaamacadu u fido, dadkaasna loo sameeyo dib u celin hantiyeed.
Faysal Cali Waraabe, wuxuu sheegay in Somaliland ay hoos uga dhacday daryeelka baahiyaha aasaasiga ah isagoo tusaale u soo qaatay caafimaadka, biyaha iyo waxbarashada oo qiimahoodu qaali yahay, wuxuuna Faysal balan qaaday in haddii uu talada dalka ku guulaysto uu bulshada Somaliland u samayn doono waxbarashada farsamada gacanta.
Madasha oo uu fadhiyay Madaxweyne Siilaanyo, wuxuu Faysal balan qaaday in haddii uu doorashada ku guulaysto uu dhisi doono dawlad kooban oo tayo leh, “Dawlad yar oo kooban oo dadku u simanyahay oo ka caagan musuqmaasuq, sharci ayaan dalka ku soo rogaynaa oo maanta midiba wuxuu doono ayuu samaynayaa. Madaxweynuhu haka joojiyo wasiirada iyo DG-yada ololeeya.” ayuu yidhi Fayal Cali Waraabe.
Isagoo la hadlaya maayarada Hargeysa iyo Berbera, wuxuu yidhi “Haddaanu aragno maayarada Hargeysa iyo Berbera oo Muuse gobalada u raacaya waxaanu u arkaynaa inuu u sido lacagtii dawladda hoose oo cashuurta waanu joojinaynaa, dhicina mayso in lacagta Hageysa nin loogu ololeeyo aan ka qatanaanado, dhici mayso waanu joojinaynaa cashuurta walaahi, waa in loo sinaadaa.” ayuu yidhi Faysal oo aad sacabka loogu tumay.
Ugu dambayn isagoo madaxweyne Siilaanyo la hadlaya wuxuu yidhi “Markaas madaxweyne, hawl badan ayaa kuu taala si aad uga tago taariikh waa inaad dawladaada xakamaysaa, dawladani tii Musue maaha ee waa taadii tiisu way dhalan doontaa ee waa inaad xakamaysaa.”
Previous articleUhuru Kenyatta: “Afgembi garsoor ayaa la igu sameeyay”
Next articleDawladda Somalia oo xoojisay mowqifkeedii khilaafka Waddammada Khaliijka